Kunzwa kugumbuka muvaviri | Bezzia
Kunzwa kugumbuka mumumwe
Kunyange zvazvo zvingaita sezvinoshamisa, Kunzwa kugumbuka kunowanzowanwa muvakaroorana vakawanda. Chinhu chomuzvarirwo chinowanzoitika kana muchirwa nomumwe munhu. Kana izvi zvikaitika, zvakakosha kuti ukwanise kuzvigadzirisa, nekuti zvikasadaro zvinogona kuunza dambudziko rakakura kune ramangwana rakanaka revakaroorana.
Muchinyorwa chinotevera tichataura nezvekuti sei hasha dzichibuda pachena muhukama uye zvokuita kuti zvipere.
1 Kugumbuka kuri muvaviri ava
2 Zviratidzo zvekuti pane kutsamwira mudiwa
3 Nzira yekukunda sei chigumbu kune mumwe wako
Kugumbuka kuri muvaviri ava
Manzwiro emhando iyi anowanzo buda pachena mushure mekurwadziswa nemudiwa. Kuti chinhu chacho chisaenda kune zvakawanda, kutsamwa kunofanira kuva kwenguva pfupi uye kunyangarika munguva pfupi. Zvadaro tinokuratidza kuti ndeapi mamiriro ekugumbukira munhu ari chikamu chehukama anowanzoonekwa:
Kusaziva kutaura zvinonzwa mumwe kune mumwe wake, zvinogona kutungamirira kune kumwe kutsamwira mudiwa kuti auye pachena.
Kuvepo kwekushungurudzwa kwemuviri kana mupfungwa nemudiwa, zvinokonzera hasha dzakasimba kuti dzimuke pazviri.
Kusavimbika kunokonzerwa nekusavimbika kwakati Zvinogona kukonzera kuvenga kukuru kune mumwe munhu.
Zviratidzo zvekuti pane kutsamwira mudiwa
Chiratidzo chakajeka chinogona kuratidza kuti pane kugumbuka kune vaviri ava, Imhaka yokusakwanisa kukanganwira chinhu chave chichirwadza zvikuru. Kukuvadzwa kwakagamuchirwa kwakakura uye kwakakosha zvekuti chero chiito kana chiito chemumwe munhu chinogona kugumbura. Chimwe chezviratidzo zvinoratidza kuti pane kugumbuka kukuru muvaviri ava, imhaka yekuti kuvimbana kukuru kwarasika.
Nzira yekukunda sei chigumbu kune mumwe wako
Kana kutsamwa kuchikura uye kusakundwa, zvingava zvakanaka kuti uende nokukurumidza sezvinobvira kune unyanzvi anoziva kugadzirisa dambudziko rakadaro. Nezvekurudziro, zvakakosha kufunga nezve zvinotevera:
Kukurukurirana uye nhaurirano chinhu chakakosha mune chero rudzi rwehukama. Vanhu vanonzwisisa nekutaura uye zvinokwanisika kugadzirisa dambudziko iri. Zvakanaka kugara pamwe chete nemudiwa uye kubvuma chigumbu chaunonzwa kwavari.
Kana chigumbu chiripo, zvakakosha kuita zvisarudzo zvinobatsira kupedza dambudziko. Kana pasina chaitwa, Zvingangodaro kuti dambudziko racho richadzika midzi zvishoma nezvishoma uye rinogona kupedza ukama.
Kutsvaga rubatsiro kubva kune mumwe munhu kunogona kuva chinhu chikuru mukurega kugumbuka uye kunakidzwa zvizere nevaviri. Kutenda kune nyanzvi yakanaka, kuvimba uye kuchengeteka kunogona kushandiswa muhukama uye kuita kuti ienderere mberi pasina dambudziko.
Muchidimbu, kunzwa kutsamwira mudiwa kunogona kuva kwakanaka kushanda pakuvimbana muukama uye ita kuti ive yakasimba zvikuru. Kana chigumbu chikasagadziriswa, zvinokwanisika kuti zvinogona kutungamirira kumagumo ehukama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Kunzwa kugumbuka mumumwe
Quick pear uye mbudzi cheese quiche
Mazano ekushongedza nemarekodhi ako evinyl